Induction Shrink Fitting Aluminium Pump Housing Part | Umakhi womshini wokushisa wokungeniswa | izixazululo zokushisa zokungeniswa
Induction Shrink Fitting Aluminium Pump Housing Ingxenye
Lolu uhlelo lokusebenza lokususa ingxenye ye-Shrink fit Part. Inqubo yamanje yekhasimende isebenzisa umshini wokucindezela ukuze kukhiphe ingxenye efakiwe. Noma kunjalo, lokhu kudinga amandla nesikhathi. Ngokusebenzisa ukushisa, izindlu zinganda ngokwanele ukuvumela ukususwa okulula kwengxenye efakiwe ngamandla amancane. Isidingo sesikhathi sekhasimende ukuqedela Ukususa Ingxenye ye-Shrinkfit ngaphakathi kwemizuzu ye-7.
DW-HF-6KW uhlelo lokungenisa lokungenisa
• Izindlu zokupompa i-Aluminium Part OD 2.885 ”(73.279mm), udonga 0.021” (.533mm)
Ukushisa: Cishe i-400 ° F (204 ° C)
Isikhathi: imizuzwana ye-100
Ukuqedela Ukususwa Kwengxenye yeShrinkfit, beka ingxenye kukhoyili, ngakho-ke ingaphezulu lezindlu lisondele ngangokunokwenzeka ngaphezulu kwekhoyili.
Ukuhlolwa okuthile kwakudingeka ukuthola isikhathi esifanele namandla. Sithole ukuthi imizuzwana ye-100 yayilungele ukususwa kwengxenye, ebephansi kakhulu kunomkhawulo wekhasimende wemizuzu ye-7
Imiphumela / Izinzuzo:
Umhlangano ohloliwe ungashiswa ekushiseni okudingakalayo ngaphansi kwemizuzu engu-7 usebenzisa i DW-HF-6KW uhlelo lokungenisa lokungenisa futhi ikhoyili yakhelwe inkambiso. Isikhathi sokushisa seCustom Coil kwakuyimizuzwana eyi-100, Ithempelesha kwakudingeka isondele ku-400 ° F (204 ° C) ukuze sandise ingxenye ngokwanele ukuze isuswe. Ingxenye isuswe ngamandla athile okudonsa asetshenziswa kuyo njengoba izindlu zepompo zazifinyelela ku-400 ° F (204 ° C).
Lolu hlelo lokusebenza lwe-Shrink Fit lubuye futhi lwabuyekezwa ukuthola ukuthi uhlelo olusetshenziswayo lwamandla aphansi lungasetshenziswa. Kulesi simo, isidingo sekhasimende sasiyimizuzu ye-7, futhi sathola ukususwa kwengxenye kumasekhondi we-100. Ingabe uhlelo lwamandla aphansi lungasusa le ngxenye ngemali ephansi? Uhlelo lwamandla aphansi lungamukeleka uma umgomo wethu uyingxenye yokufakwa. NgeShrink Fit - Ingxenye yokufakelwa, izinga lokushisa kancane lisengaphumela kwinqubo ephumelelayo. Kodwa-ke, nge-Shrink Fit - Ukususwa Kwengxenye, kubalulekile ukushisa ngokushesha. Izinga lokushisa elihamba kancane lingaholela engxenyeni efakiwe ibuye ifudumale, futhi futhi yandise. Ingxenye efakiwe kungenzeka ihlale "inamathele". Ngokushisa ngokushesha, sigwema le nkinga. Ikhasimende kuleli cala linqume ukuthi bobabili basebenzise uhlelo ukufakwa kwengxenye KANYE nokususwa kwengxenye. Isistimu ye-2 kW ilungele i-Shrink Fit - Ingxenye yokufakelwa; kanye ne-DW-HF-6KW heater induction izosetshenziselwa i-Shrink Fit - Ukususwa Kwengxenye
Ukulawulwa okuqondile kwesikhathi kanye lokushisa
Amandla afunwayo ngemijikelezo yokushisa esheshayo
Inqubo ephindaphindwayo, ayinciki kumsebenzisi
Ukushisa okuphephile ngaphandle kwamalangabi avulekile
Ukushisa kwamandla okusebenzayo
Izigaba Ubuchwepheshe Amathegi Ukungeniswa kuncipha kufanelekile, shrink fit, Shrink Fit Aluminium, shwabanisa fit aluminium tube Imeyili kwemikhumbi
Isingeniso Annealing Copper Tubes
Induction Brazing Aluminium kwi-Aluminium Tube
lokungeniswa Imishini Yokucindezela Ukushisa